How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow 4.8.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.8.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ႐ုပ္ျပမ်ား How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow
How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
လွတ်လပ်စွာသင်ယူဘို့ 5000 လဲ tutorial,
လစဉ်လတိုင်းတင်သွင်း 50000 ရေးဆွဲ,
500,000 အနုပညာရှင်များ, စကားပြောနှင့်အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှ
ဤသည်သင်ယူမှုနှင့်ခွဲဝေမှုအတွက်အကောင်းဆုံးပုံဆွဲ App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအစပြုသူမှန်လျှင်, ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်အတူသင်ယူကြသည်။ သငျသညျ drawing မှာကောင်းသောမှန်လျှင်, သင့်အနုပညာလက်ရာများမျှဝေနောက်လိုက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရ။
အဘယ်သူမျှမဆိုအတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုလိုပါတယ် DrawShow အရောင်မှရေးဆွဲထံမှကာတွန်းလဲ tutorial အားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်းသုံးပါနှင့်လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာ, ခြေလှမ်းအားဖြင့်သင့်လေဖြတ်ခြေလှမ်းဆွဲ, သင်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်အနုပညာ, ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်။9(^ ᴗ ^) 6
အခမဲ့ပို့ချချက်တွေကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေ့စဉ်ကိန်းဂဏန်းများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, အဆောက်အဦးများ, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အခြားသောအမျိုးအစားများပါဝင်သည်ထားတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာရှင်များနှင့် fanart ချစ်သူများမှ updated ။ သင်တစ်ဦးအစပြုသူသို့မဟုတ်တစ်မာစတာများမှာနေပါစေ, သင်အမြဲစိတ်ဝင်စားတစ်ခုခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ခဲတံ, စုတ်တံ, လှံခြံ, tools တွေကိုဖြည့်ဆည်း, အရောင်ကောက်နေကိရိယာများ, စတုဂံများနှင့်ပတ်ပတ်လည် tools များအပါအဝင် Power Drawing Tool များ, စသည်တို့ကိုသင်ကအထူ, လင်းမြင်သာမှုနှင့်လိုင်းစတိုင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
MULTIPLE အလွှာထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သင်, ရေးဆွဲရေး coloring နှင့် hooking များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအလွှာကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒါဟာပုံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းစေသည်။
Vector zoom ကိုသင်ချောချောမွေ့မွေ့မဆို mosaic သို့မဟုတ် aliasing မရှိဘဲပတ္တူ၏ဒါမှမဟုတ်ထွက်ချဲ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်ဆွဲထဲမှာပစ္စည်းတန်ချိန်။ အဆိုပါကာတွန်းပျဉ်ပြား, အားလပ်ရက်ကတ်များနှင့်လက်စွဲစာအုပ်တင်းပလိတ်များသင်ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုဆောင်ခဲ့ရမည်။
အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုမှုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သငျသညျပတ္တူပေါ်ဆွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ကှနျယကျမပါဘဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်လဲ tutorial နှင့်အတူသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကျော်သည်ငါးသန်း anime ပရိတ်သတ်တွေ DrawShow ဒေါင်းလုပ်လုပ်။ သူတို့ကနေ့တိုင်း fanart ရေးဆွဲထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖန်တီးပါ။
အမေရိကန်ရုပ်ပြ, ဥရောပရုပ်ပြ, ဂျပန် Manga, ကိုရီးယား manga ကိုနှင့်အခြားသူများ: လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအဆိုတော်များကွဲပြားခြားနားသော anime အနုပညာစတိုင်များဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဒါဟာအခြားတိုင်းပြည်ကနေအနုပညာရှင်တွေအတူဆွေးနွေးမှု၌သင်တို့၏နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးပါတယ်။
သငျသညျအမြိုးမြိုး, tag ကိုသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးဖြင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးရေးဆွဲရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျလညျး, ကြိုက်နှစ်သက်မှတ်ချက်ပေးရန်ဒါမှမဟုတ်ရေးဆွဲစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ subscribe ဖို့စာရေးသူကနောက်လိုက်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။
တစ်ဦးတာဝန်ယူအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်ကျနော်တို့အသုံးပြုသူ generated content တွေကိုတစ်တင်းကျပ်ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အဆိုပါပုံဆွဲမူပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားပါ။ သငျသညျသဲလွန်စသို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံဆွဲရည်ညွှန်းလျှင်, သင်မူရင်းစာရေးသူနှင့်မာကု၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသူရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများအပေါ်ရပ်ရွာအသုံးအနှုန်းများသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်မှုချိုးဖောက်ကြောင်းမဆိုပုံဆွဲဖျက်ပစ်ပါမည်။ သင်သည်မည်သည့်ပုံဆွဲချိုးဖောက်တှေ့ရလြှငျ, ချက်ချင်းအာမေဍိတ် button ကိုအတူကသတင်းပို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုသူကမူပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းစောင့်ရှောက်ကူညီခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
main menu ကို၏ 1. တုံ့ပြန်ချက် function ကို
အဆိုပါပုံဆွဲစာမျက်နှာပေါ်တွင် 2. အာမေဍိတ် button ကို
3. စီမံအုပ်ချုပ်သူကို "CiCi DrawShow" ကိုပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျကို Send
5. ဆက်သွယ်ရန် SNS ပေါ်တွင်တရားဝင်အကောင့်
က) ကို Facebook: www.facebook.com/drawshowapp
ခ) ကို Twitter: www.twitter.com/drawshow
ဂ) Instagram ကို: www.instagram.com/drawshowapp
How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow အား အခ်က္ျပပါ
xzzx1 စတိုး012
How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.8.1.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.drawshow.com/privacy.html
App Name: How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow
Release date: 2019-07-17 11:58:02
လက်မှတ် SHA1: 0E:C3:FE:59:95:44:5B:1B:DC:BA:57:32:00:24:D4:3A:A7:40:E4:83
ထုတ်လုပ်သူ (CN): DrawShow
အဖွဲ့အစည်း (O): DrawShow studio
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): China
How to draw anime & manga with tutorial - DrawShow APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ